बिरालो हरायो, भेट्टाउनेलाई साढे १७ हजार पुरस्कार ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाजबिरालो हरायो, भेट्टाउनेलाई साढे १७ हजार पुरस्कार !
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगकी पूर्व आयुक्त इला शर्माको बिरालो ह’राएको छ। आयुक्त शर्मा गएको बुधबार नेपालबाट दिल्ली जाने क्रममा उनको बिरालो गोरखपुर रेलवे स्टेशनमा हराएको हो। पूर्व आयुक्त शर्माले दिल्ली जाने क्रममा बिरालो साथमा लिएर गएकी थिइन् । बिरालो हराएपछि गोरखपुर रेलवे प्रशासनले बिरालाको खोजीको धेरै प्रयास गरेको तर बिरालो नभेटिएको भारतीय दैनिक अखबार हिन्दूस्तानले जनाएको छ ।